Shiinaha tayo wanaagsan oo tayo sare leh 24V 60Ah LiFePO4 baakad batari oo loogu talagalay soosaaraha iyo alaab-qeybiye AGV | LIAO
1. Kiiska macdanta ah 24V 60Ah LiFePO4 xirmo battey oo loogu talagalay codsiga AGV.
2. Si dhakhso leh u buuxsamaysa: Maxda ugu sarraysa ee wax lagu qaadan karaa waxay noqon kartaa 120A oo ah 2C, waxay ka dhigan tahay in batteriga lagu buuxin karo 0.5 saacadood.
Qaabka Lambar ENGY-F2460T
Awoodda magaca 60Ah
Ugu badnaan lacagta hadda 120A
Ugu badnaan dheecaanka hadda 60A
Codsiga AGV, koronto bixinta
3. Miisaanka Fudud: Qiyaastii kaliya 1/3 culeyska baytariyada aashitada leedhka.
4. Badbaadinta sare: Waa nooca batroolka lithium ugu badbaado badan ee laga aqoonsan yahay warshadaha.
5. Shaqada isgaarsiinta: RS485
6. Awoodda cagaaran: Ma laha wasakhaynta deegaanka.
7. Qaas ahaan loogu talagalay AGV (Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida).
(Gawaarida iswada ee otomaatiga ah, AGV marka la soo gaabiyo), oo badanaa loo yaqaan 'tarorol AGV'. Waxaa loola jeedaa gaari xamuul ah oo lagu qalabeeyay aaladda elektromagnetic ama aaladda tooska ah ee indhaha, oo awood u leh inuu ku wado waddo marin hagitaan ah, oo leh badbaado nabadgelyo iyo howlo kala duwan oo wareejin ah.
Marka la adeegsanayo codsiyada warshadaha, gaariga wadaha looma baahna, batariyada dib loo soo celin karo ayaa loo isticmaalaa ilaha korantada. Guud ahaan, dariiqiisa iyo hab-dhaqankeeda waxaa xakamayn kara kumbuyuutar, ama habka elektromagnetic-ka-soo-socda ayaa loo isticmaali karaa si loo dejiyo waddadiisa. Jidka elektromagnetic-ku wuxuu ku dheggan yahay sagxadda, gaariga aan cidi wadin wuxuu ku tiirsan yahay macluumaadka ay keeneen socodka iyo ficil-socodka wadada elektromagnetic.
Muuqaalkeeda xuska leh waa darawal aan cidna wadin. AGV wuxuu ku qalabeysan yahay nidaam hagitaan toos ah, kaas oo hubin kara in nidaamku si otomaatig ah ugu socon karo waddo horay loo sii cayimay iyada oo aan la wadin tijaabada gacanta, isla markaana si toos ah alaabta ama alaabada looga qaado barta laga bilaabo ilaa halka loo socdo.
Muuqaal kale oo ka mid ah AGV waa dabacsanaantiisa wanaagsan, heerka sare ee otomaatiga iyo heerka sare ee sirdoonka. Wadada wadista ee AGV si fudud ayaa loo beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelada shuruudaha booska lagu keydiyo, socodka socodka wax soo saarka, iwm., Iyo qiimaha lagu beddelayo waddada waxay la mid tahay ta suumanka xamuul-dhaqameedka. Marka la barbar dhigo khadadka gudbinta adag, waa mid aad qaali u ah.
AGV guud ahaan waxay ku qalabeysan tahay qaab rar iyo dejin, taas oo si otomaatig ah ula xiriiri karto qalabka kale ee saadka si loo xaqiijiyo otomaatiga howlaha guud ee rarida, dejinta iyo maaraynta alaabada iyo qalabka. Intaa waxaa dheer, AGV sidoo kale waxay leedahay astaamaha wax soo saarka nadiifka ah. AGV waxay ku tiirsan tahay baytarigeeda si ay u bixiso awood, buuq iyo saxaro inta lagu guda jiro howsha, waxaana loo isticmaali karaa meelo badan oo u baahan jawi nadiif ah oo shaqo.
Hore: Iibka kulul 19 inch racking sii kordhaya UPS batari 48V 40Ah lithium ion batari
Xiga: SOC iyo gacanka waxaa kujiray baako batari 36V 40Ah LiFePO4 oo loogu talagalay mootada korantada / mootada / gawaarida gawaarida
Warshad si toos ah u iibinta miisaanka khafiifka ah 48V 24Ah LiFePO4 xirmo batari oo loogu talagalay codsiga AGV